Kuti ezvokunambira kunze kwomuviri waamai chirwere kushandiswa chete
Tapota verenga pasuru iyi pinza nokungwarira asati kushandisa uye mukanyatsochengeta kutevedzera mirayiridzo. Rakavimbika munhu akaidza zvabuda hazvigoni akavimbisa kana paine chero zvarakasiya kubva nemirayiridzo iri pasuru muwedzero.
chirwere Kit 25-hydroxy Vitamin D (fluorescence immunochromatographic munhu akaidza) ndiye fluorescence immunochromatographic munhu akaidza nokuda quantitative vasabatwa 25-hydroxy Vitamin D (25- (OH) VD) mu serum dzevanhu kana plasma, iro ainyanya kushandiswa kuongorora kuti siyana vhitamini D.It ndiyo webetsero chirwere reagent.All zvakanaka mharidzo anofanira yasimbiswa nedzimwe methodologies. Bvunzo izvi zvichiitirwa kuti nyanzvi pane zveutano kushandisa chete.
Vitamin D ndiko vhitamini uye ane steroid kemikari, kunyanya kusanganisira VD2 uye VD3, ane struction zvakafanana chaizvo. Vhitamini D3 uye D2 vari kutendeukira 25 hydroxyl vhitamini D (kusanganisira 25-dihydroxyl vhitamini D3 uye D2). 25- (OH) VD mumuviri womunhu, yakadzikama struction, mukuru yevasungwa. 25- (OH) VD zvinoratidza yaipedzerwa vhitamini D, uye kutendeuka mano vhitamini D, saka 25- (OH) VD anonzi kuti zvakanakisisa chinoratidza zvekuongorora padanho vhitamini D.The chirwere Kit kwakavakirwa immunochromatography uye anogona kupa Somugumisiro mukati kwemaminitsi 15.
KWATINOITWA OF THE nzira
The Kamudzira rebvunzo mudziyo zvinenge zvakazara nemashoko Conjugate pakati BSA uye 25- (OH) VD pamusoro bvunzo nharaunda uye mbudzi Anti netsuro IgG antibody pamusoro pesimba nharaunda. Marker Pedhi vari zvemapuranga ne fluorescence chiratidzo Anti 25- (OH) VD antibody uye netsuro IgG pachine. Kana achiedza yokuenzanisira, 25- (OH) VD mu mharidzo zvinobatana pamwe fluorescence anozivikanwa Anti 25- (OH) VD antibody, uye zvinoumba masoja nezvakasanganiswa. Under Zvakaitwa immunochromatography, zvakaoma kubuda nenzira absorbent bepa, kana kunzwisisa vakapfuura bvunzo nharaunda, The vakasununguka fluorescent zvechinguvana vachaparadzwa pamwe 25- (OH) VD pamusoro membrane.The wevasungwa pakati 25- (OH) VD akaipa kuwirirana kuti fluorescence chiratidzo, uye wevasungwa pamusoro 25- (OH) VD mu mharidzo anogona kuonekwa ne fluorescence immunoassay munhu akaidza.
REAGENTS AND MATERIALS kusvitsa
25T pasuru zvinoriumba :
.Test kadhi nomumwe angazvidzvisa pouched aine desiccant 25T
.A mhinduro 25T
.B mhinduro 1
.Package pinza 1
Zvaidiwa ASI KWETE KUGOVERA
Sample muunganidzwa mudziyo, timer
Mharidzo PACHIKAMU okuchengetera zvinhu
1.The ivhu kuedzwa zvinogona serum, heparin anticoagulant yeplasma kana EDTA anticoagulant plasma.
2.According kuti mureza unyanzvi kuunganidza mharidzo. Serum kana kuti plasma yokuenzanisira inogona kuchengetwa refrigerated pa 2-8 ℃ kuti 7days uye cryopreservation pazasi -15 ° C nokuda 6 mwedzi.
3.All yokuenzanisira vasingatongi Ndinoda-nyungudika zvinogara.
Munhu akaidza nzira
The bvunzo nzira yacho chairatidza aone immunoanalyzer Chinyorwa. The reagent bvunzo nzira iri sezvinotevera
1.Lay parutivi reagents zvose uye ivhu mumba tembiricha.
2.Open ari Portable Immune Analyzer (WIZ-A101), kupinda nhoroondo pasiwedhi Login maererano nokushanda nzira huchashandiswa, uye kupinda vasabatwa inowanikwa.
3.Scan kuti dentification remitemo kuzosimbisa bvunzo chinhu.
4.Take kunze bvunzo kadhi kubva foil bhegi.
5.Insert muedzo kadhi kupinda kadhi slots, atarise QR code, uye ona kuti bvunzo chinhu.
6.Add 30μL serum kana kuti plasma yokuenzanisira kune A mhinduro, uye sanganisa zvakanaka.
7.Add 50μL B dambudziko pamusoro nezvakavhenganiswa, uye sanganisa zvakanaka.
8 .Siya musanganiswa kwemaminitsi 15.
9.Add 80μL muvhenganiswa kuti mharidzo zvakanaka pamusoro kadhi.
10.Click ari "mureza bvunzo" bhatani, pashure maminitsi 10, huchashandiswa vachangoerekana kuona bvunzo kadhi, unogona kuverenga zvabuda kubva kuratidzwa chinovhara chiridzwa, uye chinyorwa / anodhinda muedzo zvabuda.
11.Refer kuti kurairira Portable Immune Analyzer (WIZ-A101).
25- (OH) VD romuzvarirwo siyana: 30-100ng / ML
Zvinokurudzirwa kuti Murabhoritari mumwe asimbise yayo romuzvarirwo Range vaimiririra ayo murwere kwevanhu.
Pakuongororwa AND DUDZIRO
isu takanzwa pamurayiro kupfuura mashoko ndiyo bhuku penguva akasimbisa kuti vasabatwa Data ose Kit ichi, uye chinoratidzwa kuti Murabhoritari neimwe inofanira kumisa Munongedzo penguva nokuti akakodzera kunotoda kukosha vemo munharaunda iyi.
Isu takanzwa pamurayiro Kuwanda 25- (OH) VD riri kupfuura bhuku siyana, uye vasiri kuchinja kana estrés zvinofanira excluded.Indeed kanganisika, vanofanira nokubatanidza chiremba chiratidzo kuongorora chirwere.
Isu takanzwa pamurayiro Zvakabuda nzira iyi ndivo chete kushandiswawo nezvezvinotaurwa siyana yakatangwa nzira iyi, uye migumisiro havasi akafanana zvakananga nevamwe nzira.
.Other zvinhu zvinogona kukonzera zvikanganiso zviri kuonekwa zvabuda, kusanganisira zvekushandisa zvikonzero, operative zvikanganiso uye dzimwe mharidzo zvinhu.
Kuzvichengeta Uye YEUTONGI
isu takanzwa pamurayiro Kit ndiwo mwedzi 18 pasherefu-upenyu kubva musi gadzira. Chengetera tsva Kits pa 2-30 ° C. MUSAENDA -oma. Usashandisa mhiri musi wazvinenge.
.Do haana kuzarura akanamwa homwe kusvikira wagadzirira kuita bvunzo, uye chete-kushandiswa bvunzo chinorehwa kushandiswa pasi zvaida kwezvakatipoteredza (tembiricha 2-35 ℃, mwando 40-90%) mukati 60 mins nokukurumidza zvinogoneka.
.Sample diluent rinoshandiswa pakarepo pashure pokunge akazarurwa.
isu takanzwa pamurayiro Kit zvinofanira rakanamwa uye anodzivirirwa unyoro.
.All yakanaka specimens inofanira yakasimbiswa nedzimwe methodologies.
.All specimens anofanira kubatwa sevanogona dzinosvibisa.
.DO NOT kushandisa akapera reagent.
.DO NOT Kukurudzirana reagents pakati Kits nedzimwe mugove hapana ..
.DO NOT shandisazve bvunzo makadhi uye chero chenhando nenhumbi.
.Misoperation, kunyanya kana shoma mharidzo kungaita kuti kuguma zvarakasiya.
.As chero munhu akaidza achishandisa negonzo antibodies, mukana aripo kuti kukanganiswa evanhu Anti-mbeva antibodies (Hama) ari chiratidzazvizhinji. Specimens kubva varwere vakagamuchira kugadzirirwa monoclonal antibodies kuti chirwere kana kurapa ingasanganisira Hama. Specimens kwakadaro kungaita zvenhema zvakanaka kana nhema nemigumisiro yakaipa.
.This bvunzo mugumisiro wacho chete nemhaka yokuora reference, hakufaniri kuva chete hwaro kurapwa chirwere uye kurapwa, varwere chiremba utariri kunofanira nzwisisika nehanya pamwe zviratidzo zvayo, nhoroondo zvokurapa, zvimwe rabhoritari ongororo, kurapwa mhinduro, epidemiology uye mamwe mashoko .
.This reagent chete inoshandiswa serum uye plasma nemiedzo. Zvingasava kuwana yakarurama mugumisiro kana kushandiswa nevamwe ivhu akadai mate uye weti uye etc.
Linearity 5 kumar / ML kusvika 120 kumar / ML hama kutsauka: -15% kuti + 15%.
Linear kuwirirana coefficient: (R) ≥0.9900
kunyatsoita The kupora zvazvingava zvichava mukati 85% - 115%.
(Hapana zvinhu panguva interferent kuedzwe raimuvhiringidza ari munhu akaidza) Interferent Interferent wevasungwa
Chizenga 200μg / ML
vhitamini D3 50mg / ML
vhitamini D 50mg / ML
1.Hansen JH, et al.HAMA dzevamhan'ari Murine Monoclonal Antibody-Based Immunoassays [J] .J pamusoro Clin Immunoassay, 1993,16: 294-299.
2.Levinson SS.The Nature Heterophilic Antibodies uye Basa iri Immunoassay chipingaidzo [J] .J pamusoro Clin Immunoassay, 1992,15: 108-114.
Musimboti zviratidzo anoshandiswa:
Ezvokunambira kunze kwomuviri waamai chirwere Medical mudziyo
Bvunza Instructions For Use
Xiamen Wiz ounyanzvi hwokushandura zvinhu zvipenyu CO, LTD.
Address: 3-4 Floor, NO.16 Building, Bio-zvokurapa Workshop, 2030 Wengjiao West Road, Haicang District, 361026, Xiamen, China
Previous: Chirwere Kit nokuti D-Dimer (fluorescence immunochromatographic munhu akaidza)
Next: Chirwere Kit nokuti Cardiac Troponin I (fluorescence immunochromatographic munhu akaidza)
Zvemwoyo Test Kit
Chirwere Kit nokuti Cardiac Troponin I (fluoresc ...
Chirwere Kit nokuti Isoenzyme MB pamusoro Creatine Kin ...
Chirwere Kit nokuti D-Dimer (fluorescence Immuno ...